SWMC-360-DTH seperated crawler yakaiswa pamusoro hydraulic pasi-the-gomba drilling rig |
SWMC-360-DTH drilling rig inoshandiswa zvakanyanya mumigodhi yakavhurika yakaita sesimende, simbi, migodhi yemarasha, makwari, kuchera gomba munjanji, mugwagwa mukuru, kuchengetedza mvura, magetsi emvura uye mapurojekiti ekuvaka edziviriro yenyika.
Secaterated crawler yakaiswa pamusoro hydraulic pasi-the-gomba rekuchera rig
SWMC-360-DTH drilling rig inoshandiswa zvakanyanya mumigodhi yakavhurika yakaita sesimende, simbi, migodhi yemarasha, makwari, kuchera gomba munjanji, mugwagwa mukuru, kuchengetedza mvura, magetsi emvura uye mapurojekiti ekuvaka edziviriro yenyika. Yayo aperture gomba saizi renji ndeye 90-1152mm, iyo inogona kuve yakashongedzerwa nemhando dzakasiyana dzemhepo compressor kuti ione yakanyanya kudzvanywa DTH.
1. Off-load kugona
Muviri wefuremu wakagadzirwa negiravhiti shaft mudziyo, uyo unodzikisira kupokana panguva yekufamba, inosimudzira kusimba kwekubatana pakati pemuviri nenjanji, uye inoita kuti chassis yedhiri yekuchera igare uye yakagadzikana. Pakuyambuka pamawere, uye kukwira kwenguva refu kunogona kusvika 35 degrees.
Yakatwasuka-zino inodzikisira ine yakaderera tembiricha kukwira, yakakwira-inotakura uye hupenyu hurefu hwesevhisi, iyo inogona kugadzirisa kutenderera kumhanya zvinoenderana nekuoma kwedombo. Rotary musoro wakashongedzerwa neEton hydraulic mota kuti uwane yakagadzikana yebasa mamiriro. Iyo yakashongedzerwa nekusimbisa shock absorber joint kuti ideredze maitiro ekuita simba rekuchera maburi kukuvadza rotary reducer.
3. Kubvisa guruva mudziyo
Iyo inounganidzira guruva inotora tekinoroji yekufemerwa kupfapfaidza guruva kuchenesa, iyo ine simba rakasimba rekuchenesa guruva, yakakwira kubvisa guruva, yakaderera emission concentration, yakaderera air leakage rate, yakaderera simba rekushandisa, yakagadzikana uye yakavimbika kushanda, uye inochengetedza hutano hwevashandisi. Nemhando yepamusoro sefa zvinhu, iyo huruva yekubvisa kunyatsoshanda uye hupenyu hwesevhisi hunovimbiswa.
Kuchera gomba dhayamita 90-152mm
KushandaKing Air Pressure 1.38-2.46 Mpa
Kushandura torque 1970N.m
Kutendeuka kumhanya 0-100Rpm
Sliding frame swing Kuruboshwe 53°/Kurudyi 35°
Drilling boom swing Kuruboshwe/Kurudyi 45
Drilling boom pitching yakachinjika 25°/60°
Mugadziri weInjini YUCHAI Diesel nezvimwe
Zvakapfuura: TY320-3 Bulldozer
Zvinotevera: SWMC-370-DTH yakatsaurwa inokambaira yakasungirirwa pamusoro pe hydraulic pasi-iyo-gomba rekuchera rig